कान्ति हराएका कङ्‍कालका शिर- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्ति हराएका कङ्‍कालका शिर
मेरो भव्य रुपाकार , छातीबाट उठेका अग्ला–अग्ला अगम्य शिखर हरु, डरलाग्दा हिमनदीहरु र समय–समयमा उठ्ने प्रचण्ड हिमआँधी, अत्यन्त चिसोले कठो र बनाएको हावापानी र असुविधाजनक यात्रापथका कारण मान्छे हरुका लागि म डर र आकर्षण दुवैको केन्द्र रहँदै आएको छु ।
श्रावण ३१, २०७७ हरि अधिकारी
मेरो नाम हिमालय पर्वत हो । सुदूर–पूर्वमा तिब्बतको नामचे–बरवादेखि सुदूर–पश्चिममा भारत (जम्मू–कश्मीर) को नंगा–पर्वतसम्मको, लम्बाइमा करिब २५ सय किलोमिटरर क्षेत्रफलमा करिब ५ लाख वर्गकिलोमिटर भू–भाग ओगटेर उभिएको म पृथ्वीको सबैभन्दा लामो पर्वत शृंखलामध्ये दोस्रो हुँ ।
पृथ्वीको सबैभन्दा लामो र भौगोलिक एवम् जैविक विविधताका दृष्टिले अद्भुत, पर्वत–श्रेणी भने एन्डिज् हो । दक्षिण अमेरिकी महादेशमा पर्ने, करिब ७२ सय किलोमिटर लामो यो विशाल र भव्य पर्वत–शृंखलाले आफूमा सयौं हिमनदी, ज्यालामुखी पर्वत, मरु प्रदेश, घाँसैघाँस मात्र भएका अग्ला टारीहरू, अनगन्ती ताल–तलैया र संसारकै विशालतम् जंगल अमेजन रेन–फरेस्टलाई समेटेको छ । एन्डिज् पर्वत–शृंखला दक्षिण अमेरिकी महादेशको सुदूर–उत्तरमा पर्ने देश भनेजुयलादेखि दक्षिण–पश्चिमी किनारामा पर्ने देश चिलीसम्म उत्तर दक्षिण लम्पसार परेको छ । एन्डिज्जस्तै रकी, युराल र ग्रेट डिभाइडिङ रेन्जजस्ता पृथ्वीका विभिन्न महादेशमा पर्ने अन्य पर्वत–शृंखलाहरू पनि उत्तरबाट दक्षिणतिर फैलिएका छन् । तर, युरोपका ९ देश (स्लोभेनिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, लाइख्टेन्सटिन, इटली, मोन्याको, स्विट्जरल्यान्ड र फ्रान्स्) लाई समेट्ने करिब १२ सय किलोमिटर लामो भूभाग ओगटेर उभिएको आल्प्स पर्वत–श्रेणीचाहिँ मजस्तै पूर्वबाट पश्चिमतिर फैलिएको छ ।
पूर्वमा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशदेखि पश्चिममा पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका अधिकांश ठाउँबाट उत्तराभिमुख भएर हेर्दा पूरा क्षितिजलाई ढाकेर उभिएको, चाँदीको जलप खुइलिँदै गएको संरचनाजस्तो जुन विशाल प्राकृतिक प्राचीर देखिन्छ म त्यही हुँ । करिब साढे ४ करोड वर्षपहिले मेरी माता पृथ्वीको गर्भमा रहेका निरन्तर चलायमान दुई विशाल भूमिखण्ड– इन्डियन टेक्टोनिक प्लेट र युरेसियन प्लेटको आन्तरिक घर्षणका कारण, अहिले तिब्बतको मैदान भएको इलाकामा त्यतिबेला ‘टेथिस’ नामक जुन सागर थियो, त्यसको सतहमा संकुचन आई, त्यसले ओगटेको जमिन बिस्तारै अग्लिँदै गएपछि म अस्तित्वमा आएको हुँ । टेथिस सागर सुक्न र मैले मेरो अहिलेको उचाइ प्राप्त गर्न लाखौँ वर्ष लागेको थियो । रोचक कुरो त के पनि छ भने, पृथ्वीको सतहभन्दा करिब २ सय किलोमिटर तल गर्भस्थ रहेका ती प्लेटहरू अझै पनि चलायमान छन् र मेरो उचाइ बढ्ने क्रम पनि जारी छ । यो भौगर्भिक प्रक्रियाको गति सामान्यतया थाहा पाउन नसक्ने किसिमले सुस्त भएकाले मात्र म सदियौँदेखि उस्तै देखिइरहेको हुँ । निरन्तर भइरहेको यही भौगर्भिक विचलनकै कारण दक्षिण एसियाको यो भूभाग सधैँ नै भूकम्पको उच्च जोखिममा छ ।
तर मलाई थाहा छ म उत्पत्तिकालमा जस्तो थिएँ अहिले दुरुस्त उस्तै छैन न त मसँग गाउन बाँकी मेरो कुनै महिमा नै छ । पछिल्ला केही दशकयता आएर आफूले भोग्नुपरेका दुर्दशा देखेर म अवाक् र स्तब्ध भएको छु । मानिसहरूका मनमा मप्रति कुनै उदात्त भावना नै बाँकी छैनजस्तो पनि लाग्न थालेको छ मलाई । मेरो छातीमा पलाएका अग्लाअग्ला शिखरहरू, तीमध्ये पनि सर्वाेच्च सगरमाथालाई कुनै हालतमा पनि पददलित गरिछाड्ने उत्साहले बहुलाजस्तै भएका मानिसहरूको थामिनसक्नु भीड देखेर म आत्तिन थालेको छु । यी मानिसहरू म, शैलाधिराज हिमालय पर्वतको हुर्मत लिइछाड्ने एक मात्र उद्देश्य लिएर बर्सेनि सयौँको संख्यामा मेरा शिखरहरूका आधार शिविरहरूमा जम्मा हुने गर्छन्जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई । मेरा शिखरहरूको आधार शिविर र आरोहणका बाटाहरू मात्र होइन, शिखरहरूमै समेत यी असभ्य प्राणीहरूले निष्कासन गरेर छोडी हिँडेको फोहोर–मैलाको डुंगुर लागेको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियामा आएको अस्वाभाविकताले हिमपातको मात्रा कम हुँदै गएको मात्र होइन हिउँ पग्लिने गति पनि तीव्र हुँदै गएकाले मेरो छातीमा लहरै उभिएका अनगिन्ती चुचुराहरू सधैँका लागि आफ्नो धवल कान्ति हराएका नीला कङ्कालका शिरजस्ता असुन्दर र डरलाग्दा पनि देखिन थालेका छन् ।
करिब २५ सय किलोमिटर लामो भूभाग ओगटेको मैले ताजिकिस्तान, अफगानिस्थान, पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भुटान र म्यानमार (बर्मा) गरी एसिया महादेशका ८ वटा राष्ट्रलाई समेटेको छु । मेरो दक्षिणी फेदीमा रहेका देशहरूमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी, मेरो कुल लम्बाइको एक–तिहाइ (८ सय ८० किलोमिटर) भाग पर्छ । उत्तरपट्टि पर्ने देश चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतको विस्तृत मैदानसँग मेरो सबैभन्दा लामो सिमाना छ । म हिमालय पर्वत मुख्यत: ४ शृंखलामा विभाजित छु : सबैभन्दा उत्तरतिर रहेको तिब्बती हिमालय शृंखला, त्यसपछि तिब्बती पठारको ठीक दक्षिणतिर रहेको मुख्य हिमालय, त्यसपछिको मध्य–हिमाली शृंखला र त्यसभन्दा दक्षिणमा पर्ने महाभारत लेक पनि भनिने शिवालिक पर्वत शृंखला । म हिमालय पर्वतको मुख्य शृंखलामा अग्ला–अग्ला सयौँ हिमशिखरहरू पर्छन् र पृथ्वीकै सबैभन्दा अग्ला, ८ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइका १४ शिखरहरूमध्ये ८ वटा नेपालमा नै छन् । ती आठमा संसारकै उच्चतम् शिखर सगरमाथा पनि पर्छ । माउन्ट एभरेस्ट र झयोमोलुङ्मा पनि भनिने ८ हजार ८ सय ४८ मिटर अग्लो सगरमाथा मात्र होइन ८ हजार ५ सय ८६ मिटर अग्लो संसारको तेस्रो उच्चतम् शिखर कञ्चनजंघा पनि नेपाललाई मैले दिएका अमूल्य सम्पदामध्ये एउटा हो । नेपालमा पर्ने ८ हजार मिटरमाथिका अरू हिमचुलीहरूमा लोत्से ८५१६, मकालु ८४८५, चोयु ८१८८, धवलागिरि ८१६७, मनास्लु ८१६३ र अन्नपूर्ण प्रथम ८०९१ मिटर छन् ।
भू–बनोट र वातावरणका दृष्टिले दुरुस्तै मजस्तै भए पनि मभन्दा पश्चिमतिर रहेको पर्वत शृंखलालाई भने हिमालय पर्वत नभनेर हिन्दुकुश पर्वतशृंखला भन्ने गरिएको छ । मेरो र पामिर पर्वत–श्रेणीको संयुक्त विस्तारभन्दा पनि फरक नपर्ने, करिब ८ सय किलोमिटर लामो भूभाग ओगटेको यो पर्वत शृंखलाले ताजिकिस्तान, अफगानिस्थान, पाकिस्तान र चीन गरी ४ वटा देशलाई समेट्छ । हिन्दुकुश पर्वत शृंखला हिन्दुकुश हिमाल क्षेत्रको धुर–पश्चिमी इलाकामा पर्ने त्यो भूभाग हो जसले पामिर पर्वत–श्रेणी, काराकोरम पर्वत–शृंखला र म, हिमालयको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्छ । यही पर्वत–शृंखला नजिकको एउटा विन्दुमा चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्थान, तीन देशको सिमाना पनि जोडिन्छ । हिन्दुकुश पर्वत शृंखलामा ८ हजार वा त्यसभन्दा माथिका कुनै पर्वत–टाकुराहरू नभए पनि पाकिस्तानको खैबर–पख्तुनख्वा प्रदेशको चित्राल जिल्लामा पर्ने उच्चशिखर तिरिचमिर (७ हजार ७ सय ८ मिटर) लगायत दर्जनौँ अग्ला शिखरहरू भने छन् । हिन्दुकुश पर्वतमाला त्यहाँ शदियौँदेखि विकसित बुद्धधर्मको बामियान शाखाका लागि पनि प्रसिद्ध छ । प्राचीनकालदेखि नै भारत प्रवेश गर्न चाहने सिकन्दर महान्लगायत विभिन्न रूपाकारका आक्रमणकारी जमातहरूलाई यसै पर्वतमालामा पर्ने खैबरको भञ्ज्याङले सजिलो र छोटो बाटो उपलब्ध गराउँदै आएको हो । अहिले पनि पश्चिम एसियाबाट दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने एउटै मात्र सडक खैबरको भञ्ज्याङ हुँदै पूर्वतिर लाग्छ ।
पृथ्वीको सतहभन्दा करिब २ सय किलोमिटर तल गर्भस्थ रहेका ती प्लेटहरू अझै चलायमान छन् र मेरो उचाइ बढ्ने क्रम पनि जारी छ । यो भौगर्भिक प्रक्रियाको गति सामान्यतया थाहा पाउन नसक्ने किसिमले सुस्त भएकाले मात्र म सदियौँदेखि उस्तै देखिइरहेको हुँ ।
म महान् हिमालय पर्वत आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्वतारोहणको साहसिक अभियानका लागि दिलाएको अवसर वा अन्यत्र दुर्लभ जीव–जन्तु र जडीबुटीका लागि मात्र उपयोगी छु भन्ने कसैले ठान्छ भने त्यसलाई कोरा अज्ञान भन्दा फरक पर्दैन । हो म प्रख्यात त यिनै कुराहरूका लागि छु तर मेरो उपयोगिताका अरू अनेक आयाम छन् । वास्तवमा म त दक्षिण एसियाका देशहरूका लागि प्रकृतिले दिएको एउटा वरदान हुँ । तिब्बतको पठारको ठीक दक्षिणी भागमा पर्ने बर्मादेखि पाकिस्तानसम्मको २५ सय किलोमिटरको लम्बाइलाई पूरै समेट्दै, एउटा अग्लो अभेद्य किल्लाझैँ दृढताका साथ उभिएको छु म । सुदूर–उत्तर साइबेरियादेखि मंगोलियासम्म फैलिएका उराठ बन्जर मैदानबाट दक्षिणतिर तीव्र गतिमा बहँदै आउने अत्यन्त चिसो हावा मसँग ठोकिएर जताबाट आएको हो उतैतिर फर्किन बाध्य हुने भएकाले मात्र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू जाडोले कठयाङ्ग्रिएर मर्नबाट बच्दै आएका हुन् । अर्कोतिर प्रत्येक वर्षको ग्रीष्म ऋतुमा भारतीय प्रायद्वीपभन्दा दक्षिणतिरका खाडी क्षेत्रबाट उठेर उत्तरतिर बढ्ने मनसुनी हावालाई आफूभन्दा उत्तरतिर जान रोकेर म त्यसलाई मनसुनी वर्षामा परिणत गरिदिन्छु र पूरै दक्षिण एसियालाई जलप्लावित बनाइदिन्छु । मेरो यो करतबबाट दक्षिण एसियाका देशहरू : भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र बर्मा लाभान्वित हुँदै आएका छन् ।
म दक्षिण एसिया क्षेत्रका २ प्रमुख नदी–प्रणाली सिन्धु र गंगा–ब्रह्मपुत्रको पनि उद्गमस्थल हुँ । यी दुवै नदी र यिनका अधिकांश सहायक नदीहरूका मुहानहरू कि त मेरो उत्तर–पश्चिमी सीमाक्षेत्रको हाल तिब्बतमा पर्ने कैलाश–मानसरोवर क्षेत्रमा पर्छन् कि भने मेरो काखमा रहेका असंख्य हिमनदीहरूमा । यस क्षेत्रका मुख्य दुई नदी प्रणालीमध्ये पश्चिमपट्टिको सिन्धु नदीको उद्भव तिब्बतको मानसरोवर क्षेत्रका सेङगे जाङबु र गारसाङपो नामक दुइटा मुहानबाट हुन्छ । तिब्बतबाट भारत हुँदै पाकिस्तान प्रवेश गर्ने यस नदीले मेरो उत्तरी र पश्चिमी सीमा पनि निर्धारण गर्छ ।
पाकिस्तानको कराँचीनेर पुगी अरब सागरमा मिसिने सिन्धु नदीका २५ भन्दा बढी सहायक नदी छन् । तीमध्ये मुख्य ५ सहायक नदीहरू झेलम, चेनाब, राबी, व्यास र सतलज हुन् । यी ५ नदीद्वारा सिञ्चित एउटा ठूलो भूखण्डलाई पन्जाब भनिन्छ । पन्जाब भूखण्ड यति ठूलो छ, बृहत्तर भारतको विभाजन भएर भारत र पाकिस्तान दुइटा देश बन्दा देशको साथसाथै पन्जाब प्रदेशको पनि विभाजन गर्नुपरेको थियो । आजको घडीमा भारत र पाकिस्तान दुवैतिर पन्जाब नामका राजनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रदेश कायम छन् । भारततिरको पन्जाबलाई समृद्ध भारतको एउटा सानो टुक्रा भन्दा फरक पर्दैन भने पाकिस्तानी पन्जाबको पनि त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा सदैव हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आएको छ । सिन्धु नदीले नै आर्य सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई ‘हिन्दु’ भन्ने शब्द दिएको र भारतवर्षलाई ‘इन्डिया’ का रूपमा संसारसामु प्रस्तुत गरेको हो ।
मेरो क्षेत्रको अर्को नदी प्रणालीलाई गंगा–ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली भनिन्छ । यसका दुई नदीमध्ये एक ब्रह्मपुत्रको उद्भव मानसरोवर क्षेत्रबाट साङ्ग्पो नामले हुन्छ र मेरो पूर्वतिरको अन्तिम सिमाना नपुगुन्जेल तिब्बतको पठारमा बग्ने यो नदी भारतको अरुणाचल प्रदेश नजिक पर्ने तिब्बतको पहाड राम्चे–बारवामा ठूलो घुम्ती लिई भारत प्रवेश गर्छ । त्यहाँबाट पूर्वोत्तर भारतका भूभागमा बग्ने अनेकौँ नदी–नालाहरूलाई समेट्दै बंगलादेशको सुन्दरवन क्षेत्रमा पुगी बंगालको खाडीमा गएर समाहित हुन्छ । यस प्रणालीको अर्को नदी गंगाको उत्पत्ति भारत उत्तराखण्डमा पर्ने गंगोत्री नामक हिमनदीमा भएको हो । गंगा उत्तर भारतका प्रमुख जनपदहरू हुँदै बग्छ र यमुनालगायत अनेक सहायक नदीहरूलाई समेट्दै यो पनि पनि बंगालको खाडीमै मिसिन्छ । नेपालका ३ मुख्य नदी प्रणाली कर्णाली, गण्डकी र कोसीका सबै नदीहरू गंगामै मिसिन्छन् । मेरो क्षेत्रमा मभन्दा उत्तरतिर भएका मुख्य तालहरूमा मानसरोवर ४२० वर्ग किलोमिटर, प्याङगोङ ताल ७०० वर्ग किलोमिटर, याम्द्रोक ताल ६३८ वर्ग किलोमिटर हुन् । दक्षिणतिरका तालहरूमा प्रमुख छन् तिलिचो, शे फोक्सुण्डो, रारा, गोक्यो (सबै नेपाल), गुरुदोङमार र चोङमो (भारत) आदि छन् । नेपाल र भारतका यी सबै ताल उत्तरतिरका तालहरूभन्दा धेरै साना छन् । क्षेत्रमा साना–ठूला गरी १५ हजार हिमनदी छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
मेरो भव्य रूपाकार, छातीबाट उठेका अग्ला–अग्ला अगम्य शिखरहरू, डरलाग्दा हिमनदीहरू र समय–समयमा उठ्ने प्रचण्ड हिमआँधी, अत्यन्त चिसोले कठोर बनाएको हावापानी र असुविधाजनक यात्रापथका कारण मान्छेहरूका लागि म डर र आकर्षण दुवैको केन्द्र रहँदै आएको छु । मप्रतिको अप्रतिम आकर्षणका कारणले गर्दा नै हुनुपर्छ, इतिहासको प्रथम प्रहरदेखि नै मानिसहरूले मेरो आराधना गर्दै आएका छन् । मलाई मान दिने हुटहुटीले उनीहरूले शिवजस्तो अद्भुत देवाधिदेवको कल्पना गरेका छन् र उनलाई मेरो ज्वाइँ बनाइदिएका छन् । ज्वाइँको कल्पना गरेपछि छोरी चाहिने हुनाले उनीहरूले शैलपुत्री पार्वतीको सिर्जना गरेर मेरो पोल्टामा हालिदिएका छन् ।
मेरो सान्निध्य पाएर धन्य भएको कैलाश–मानसरोवर क्षेत्र हिन्दुहरूको मात्र होइन, बौद्ध, जैन, बोन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको पनि केन्द्र रहँदै आएको छ । धेरै पहिलेदेखि नै जिज्ञासु र साहसी मानिसहरू योगीका भेषमा, तपस्वीका भेषमा, आरोहीको भेषमा, उच्च पर्वतीय प्रदेशको अनुसन्धाताको भेषमा मकहाँ आएको आएै छन् । मेरो सर्वाधिक प्रसिद्ध पुत्र सगरमाथामाथि विजय प्राप्त गर्ने धुनमा मात्रै पहिलो अभियान परिचालन गरेको इस्वी सन् १९२१ देखि अहिलेसम्म ३ सय ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सन् १९५३ मा एडमन्ड हिलेरी (न्युजिल्यान्ड) र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा (नेपाल) ले प्रथमपल्ट सफल आरोहण गरेदेखि यता करिब ५ हजार जनाले सगरमाथाको शिखर चुम्न सफलता पाइसकेका छन् ।
कवि–लेखकहरूका लागि पनि म उनीहरूको सिर्जनात्मक उडानको विषय रहँदै आएको छु । संस्कृत साहित्यका महाकवि कालीदासले मेरो महिमा गाउँदै कुमारसम्भवम् काव्यको प्रथम सर्गमा लेखेका छन् :
अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज:
पूर्वापरौ तोयनिधी नगाह्य स्थित पृथ्विव्याम् इव मानदण्ड
कुनै नेपाली कविले बिहान उठ्नेबित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् भन्ने कामना गरेका छन् भने कसैले मेरो आत्मालाई नृत्यमय देखेका छन् । अमेरिकाकी प्रसिद्ध कवि एमिली डिकिन्सन्ले समेत मेरो बन्दना गरेकी छन् भने अमेरिकाकै अर्का चिन्तक र लेखक हेनरी डेभिड थोरोले पनि ममाथि एउटा निबन्ध नै लेखेका छन् । भारतीय भाषाहरूमा मेरो विषयमा लेखिएका रचनाहरूको त सायद गणना गरेरै भ्याइँदैन ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ ११:५०
अहिले भइरहेको शरीर–राजनीतिबारेको बहस के निर्णयात्मक हुन सकिरहेको छ त ? अवश्य छैन, किनभने यसले एउटा खुट्टा मात्र समातेको छ– मर्यादा मानकको खुट्टा ।
श्रावण ३१, २०७७ प्रतिभा बेल्वासे
शरीर राजनीति– नेपाली सञ्चारमाध्यममा अहिले चर्चामा रहेका केही विषयमध्ये प्रमुख एक बनेको छ— खासगरी एक सरकारी महिला कर्मचारीले मोटरसाइकलमा ‘नग्न ढाड प्रदर्शन गरिन्’ भन्ने टिप्पणीसहित फोटो सार्वजनिक भएपछि र त्यसबारे अनेकन टिप्पणी भएपछि ।
ढाड देखिने लुगा लगाउँदैमा अमर्यादित भनेर गरिएको टिप्पणीको तत्काल प्रतिक्रियास्वरूप सामाजिक सञ्जाल हुँदै समाचारका विचार पृष्ठ र परिशिष्टांकसम्म यो विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक मात्र होइन आवश्यक पनि थियो, हो । हरेक क्रियाप्रति जनाइने प्रतिक्रियाका दुईवटा आयाम हुन्छन्— अल्पकालीन प्रतिक्रियात्मक र दीर्घकालीन निष्कर्षात्मक । पक्कै पनि प्रतिक्रियाले मात्रै सबै मुद्दा समाधान गर्ने होइन तर यो आवश्यक छ । त्यसैले प्रतिक्रियाका सीमाहरूको हकसम्म ती प्रयत्नको प्रशंसा आवश्यक छ ।
प्रतिक्रियात्मक बहसले उठाउनुपर्ने हो, निष्कर्षात्मक बहसलाई । तर, प्रतिक्रियात्मक बहस एकांगी भयो भने निष्कर्षात्मक बहस सुरु नै नहुन पनि सक्छ वा भए पनि निर्णयकारी नबन्न सक्छ वा निष्कर्ष पनि उसैगरी एकांगी बन्न सक्छ । शरीर राजनीतिको बहसमा भएको त्यस्तै छ । यसबारे भइरहेको प्रतिक्रियात्मक बहसले एउटा खुट्टा टेक्न बिर्सिएको छ जसले निर्णयात्मक प्रक्रियामा डोर्‍याउने अभ्यासमा बल पुर्‍याउन सकेको छैन भन्ने ठम्याइ नै यो लेखको आधार हो ।
अर्को स्पष्टीकरण, ज्ञान निर्माण व्यक्तिगत पहल कहिल्यै हुँदैन । चिन्तक, दार्शनिक, शोधकर्ताले तयार पारेका सामग्रीको अध्ययन, विभिन्न व्यक्तिसँगको बहस–छलफलका परिणाम हुन् । तिनलाई समय सन्दर्भअनुसार संश्लेषण गर्ने प्रयत्न मात्रै मेरो हो । यद्यपि शोधलेख नभएकाले र अखबारी लेखनकै सीमितताभित्र रहन चाहेकाले तिनको स्रोत खुलाउने जाँगर चलाइएको छैन, यो कमजोरी वा सीमितता हो ।
शरीर राजनीतिको कडी हो– शरीरबारे निर्णयको अधिकार राख्नु, यसै पनि राजनीति आफैँमा निर्णय प्रक्रिया हो । शरीरसम्बन्धका जति पनि निर्णय छन् त्यसमा स्वंय आफ्नो अधिकार रहने वा अरू कसैको भन्ने विषय नै शरीर राजनीति बहसको मुख्य कडी हो । ती निर्णय प्रक्रियालाई अरू कसैले आफ्नो बनाउनु शरीर राजनीति हो ।
महिलाको शरीर सम्बन्धमा भएको राजनीतिका मुख्य दुई पक्ष छन् : मर्यादाको मानकीकरण र सौन्दर्यको मानकीकरण । यी दुईवटा खुट्टा हुन् शरीर राजनीति उभिने ।
मर्यादाको मानकीकरणको अर्थ हो, शरीर सम्बन्धमा के गर्दा ठीक, के गर्दा बेठीक भन्ने मान्यताको निर्माण । यो मानकीकरण धेरै हदसम्म धर्म, सभ्यता र संस्कारजस्ता ‘अधिरचना’ हरूसँग जोडिएका छन् । जस्तै, इस्लाम धर्ममा महिलाको मर्यादाका लागि बुर्का अनिवार्य गरिएको छ । खस–पहाडी समुदायमा र मधेसी समुदायमा समेत शिर ढाक्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । महिलाले लगाउने कपडा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताहरू यही मानकीकरणसँग जोडिएका छन् ।
सौन्दर्यको मानकीकरणको अर्थ हो, सुन्दर को हो भन्ने मान्यताको निर्माण । यो मानकीकरण सौन्दर्यको परिभाषासँग जोडिएको छ । कस्तो स्त्री सुन्दर हुन्छे वा सुन्दरी हुनका लागि के गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा यसको आधारशिला हो । पूर्वीय प्राचीन सौन्दर्यशास्त्रमा ३६ गुणले युक्त महिला सर्वसुन्दरी हुन्थे जसअन्तर्गत मृगका जस्ता आँखा, सिंहको जस्तो कम्मर र हात्तीका जस्ता जाँघ पर्दथे ।
यी दुवै मानकीकरणको जन्म भने अर्थ–राजनीतिक आधारबाट भएको हो । समाज विकासक्रमको अध्ययन गर्ने जो कोहीलाई पनि थाहा भएको सामान्य सत्य हो, निजी सम्पत्तिको विकाससँगै पितृसत्ताको सुरुआत भयो । सम्पत्तिको स्वामित्व पूर्णत: पुरुषको हातमा भएकाले र त्यो स्वामित्व आफ्ना सन्तति (छोरा मात्रै छोरी होइन) मा सर्दै जाओस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि एकनिष्ठ विवाह प्रथाको सुरु गरियो । तर, यो एकनिष्ठता त केवल महिलाका लागि अनिवार्य थियो । एकनिष्ठ विवाह पद्धतिले पुरुष र महिलालाई दुई भागमा बाँडिदियो । पुरुषले रोज्ने अधिकार पायो । महिलाको भागमा पर्‍यो रोजिनुपर्ने नियति ।
सबैजसो जीवमा सन्तान उत्पादन प्रक्रियामा रोज्ने र रोजिने प्रक्रिया समावेश हुन्छ । सामान्यत: मानिसबाहेकका जीवमा रोज्ने अधिकार स्त्रीलिंगीमा हुन्छ किनभने ऊ सन्तानको जन्मदाता हो र हुर्काउने एवं आवश्यक जीवननिर्वाहको सीप सिकाउने पनि ऊ नै हो । उसले आफ्ना सन्तानका लागि सक्षम गुण प्रवाह गर्न सक्ने भालेको खोजी गर्छे । त्यसैले नै भाले मयूरले नाचेर आफ्नो सक्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भाले सिंहको मात्रै याल हुन्छ । बर्खामा भाले भ्यागुता कराएर पोथी भ्यागुतालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । तर, यी सबै रोजिने र रोज्ने प्रक्रिया केवल सन्तान उत्पादनको जीववैज्ञानिक प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन्छ । तर, निजी सम्पत्तिको विकाससँगै मानव जातिमा सन्तान उत्पादन प्रक्रिया केवल जीव–वैज्ञानिक रहेन । परिणाम, महिलाले एकपटकका लागि होइन सधैँका लागि रोजिनुपर्ने भयो । रोज्ने अधिकार पाएको पुरुषले आफूलाई उत्तम हुने महिलाको मानक बनायो, सौन्दर्यको नाममा । त्यसैले जाति, समुदाय, क्षेत्रअनुसार सौन्दर्यका आ–आफ्नै मानक बनाइए । सौन्दर्यको यस्तो मानकीकरणमा महिलाको दासत्वलाई अनिवार्य ठानियो । त्यसैले सबैजसो समाजमा साना पाइताला भएकी, कोमल स्त्री नै सुन्दर मानियो किनभने त्यसले महिलाको शारीरिक कमजोरीको सुनिश्चितता गर्थ्यो । साना पाइताला र कोमल स्त्री पुरुषसँग जुध्न सक्ने गरी शारीरिक रूपमा बलिष्ठ हुँदैनन् भन्ने ढाडस दिन्थ्यो ।
निजी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वले निर्माण गरेको विवाह संस्थाले अर्कोतर्फ महिला स्वंयलाई पुरुषको निजी सम्पत्ति बनाइदियो । त्यसैले गण–युद्धमा विजित भई ल्याएकीदेखि (कथित) सहमतिमा हुने विवाहसम्मको प्रक्रियाबाट ‘आफ्नो’ हुने महिलालाई मर्यादाको साङ्लोले बाँधेर ‘अरूको नजर नपर्ने’ र ‘आफ्नो घेराभित्र रहिरहने’ बनाइराख्नका लागि मर्यादाका मानकहरू बनाइए ।
जंगली युगमा (अर्थात्, सभ्यताको विकासअघि, अर्थात्, निजी सम्पत्तिको परिकल्पनाअघि) महिला र पुरुषले एकभन्दा बढीसँग यौनसम्बन्ध राख्ने गर्थे, सन्तान उत्पादन सुनिश्चितताका लागि । तर, पितृसत्ताको उदयसँगै यो बहुसम्बन्ध केवल महिलाका लागि बन्देज भयो, पुरुषले कुनै न कुनै हिसाबले जारी राख्यो । त्यसको परिणाम थियो, रूपाजीवाको सिर्जना । त्यसैले नै वेश्यावृत्ति पनि पुरुषकै सिर्जना हो । तर, निश्चित आर्थिक मोलले किन्न सकिने अल्पकालीन यौनसुख प्रदायक रूपाजीवा र दीर्घकालीन निजी श्रीमतीको बीचमा फरक त निर्माण गर्नैपर्ने थियो । त्यो फरक छुट्याउने पर्खाल बनिदियो, मर्यादा । असल स्त्री ‘उत्ताउली’ हुन नपाउने मर्यादा असल स्वास्नीको परिकल्पनाको सुनिश्चितता हो । जबकि रूपाजीवालाई ‘उत्ताउली’ हुन अनिवार्य गरियो । रूपाजीवाको भोग लोभले पुरुषको सम्पत्ति क्षयीकरण नहोस् भनेर नै हो सायद, शास्त्रहरूले ‘श्रीमतीले बिछ्यौनामा वेश्याको भूमिका पूरा गर्नुपर्ने’ दायित्व पनि बोकाइदिएका । त्यसैले नै हो, लोग्ने परस्त्री भोगमा लम्पट हुँदा उसकी स्वास्नीलाई ‘लोग्ने रिझाउन’ (जसको अर्थ हो, बिछ्यौनामा सन्तुष्ट पार्न नसकेको) आरोप लाग्ने गरेको । (यहाँ जानाजान स्वास्नी शब्दको प्रयोग गरिएको छ ताकि परिवार संरचनामा महिलाका लागि सिर्जित हेयपूर्ण स्थिति बोध होस् ।)
प्रसंगवश, यहीँनेर जोडिहालौं, केही ‘नारीवादी’ ले ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ को समर्थन गर्ने क्रममा वेश्यावृत्तिलाई छुट दिइनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘रूपाजीवा’ को वैयक्तिक अधिकार, उनीहरूको निर्णयको अधिकारप्रति समर्थन छ । तर, त्यसमा समर्थनको अर्थ गणिका परम्पराको निरन्तरताको पनि समर्थन होइन । माथि नै उल्लेख गरियो, गणिका प्रथा पितृसत्ताकै सिर्जना हो जसको जगमा छ, नारीलाई भोग्याको रूपमा लिइने चिन्तन । र, गणिका प्रथामा रूपाजीवा ‘मानव शरीर’ होइन, ‘मांस माल’ हो जसलाई तोकिएको मूल्यमा किन्न सकिन्छ । तर, आफ्नै मांस मूल्य तोक्ने अधिकार रूपाजीवामा हुँदैन । मार्क्सले श्रमिकहरू श्रमशक्तिबाट अलग गराइन्छन् भनेजस्तै रूपाजीवाहरू पनि आफ्नै शरीर मूल्य निर्धारणबाट छुट्याइन्छन् । यद्यपि रूपाजीवाले यो मूल्य तोक्ने अधिकार पाउँदैमा ऊ माल बन्ने प्रक्रियाबाट मुक्त हुँदिन । शारीरिक सन्तुष्टिका लागि दुई व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा हुने सम्पर्क र क्रेता–विक्रेताबीचको सम्बन्धमा आकाश–जमिनको फरक छ । यसै पनि बजारमा माल खरिद गरेपछि त्यसको भोगको अधिकार क्रेताको हुन्छ । त्यसैले महिलाको मालकरणलाई वैधता दिने गणिका परम्पराको निरन्तरता कुनै पनि अर्थमा स्वतन्त्रता हुन सक्दैन ।
मर्यादा मानक कमजोर, सौन्दर्य मानक बलियो
शरीर राजनीतिका दुई खुट्टामध्ये मर्यादा मानक मूलत: पितृसत्ताको वर्चस्वसँग जोडिएको थियो । यसको जगमा परिवार संस्था र विवाह प्रथा थियो । पुँजीको उत्पादन र पुनरुत्पादन प्रक्रियासँगै सुरु भएको पुँजीवाद– जसको आधारशिला बजारतन्त्र हो– को उदयसँगै पितृसत्ता र विवाह प्रथा कमजोर बन्दै गए । अब महिलालाई मर्यादाको घेराभित्र बाँधिराख्न सम्भव भएन । दुई कारणले– एक, बजारलाई श्रम शक्ति चाहिएको थियो, ठूलो संख्यामा महिलालाई जगेडा राखिरहन सम्भव थिएन । दुई, निजी पुँजीमा आधारित परिवार संरचना केवल पुँजीपति वर्गमा मात्र सीमित हुने स्थिति बनिसकेको थियो, श्रमिक समुदायमा परिवार सम्झौताको सम्बन्ध बनिसकेको थियो । त्यसैले महिलालाई घरभित्रै कैद गरिराख्ने मर्यादा मानकहरू भत्किन थाले । केही मानकहरू पितृसत्ताका अपुतालीका रूपमा शेष रहे (यहाँ मूलत: पश्चिमा समाजको चर्चा गरिएको छ, जहाँ पुँजीवाद प्रबल भयो र जहाँ मर्यादा मानकीकरण कमजोर भयो ।)
यस विपरीत सौन्दर्य मानक भने बजारतन्त्रको विकाससँगै प्रबल हुँदै गयो । यसको मुख्य कारण हो, सौन्दर्य प्रशाधन र महिलाको भोग्याकरण नै ठूलो बजार बनाइयो । सौन्दर्यका निश्चित परिभाषाहरूको निर्माण अब पितृसत्ताले होइन बजारसत्ताले गर्न थाल्यो । अवश्य पनि, त्यसको जग थियो, पितृसत्ता र विश्व पुँजीवाद । ती सौन्दर्यका मानकहरूको प्रचारका लागि ‘ग्ल्यामर जगत्’ को सिर्जना गरियो । र, सौन्दर्यको मानकीकरणमा पश्चिमा साम्राज्यवाद हावी भयो । त्यसैले वंशाणुमा नै कालो वा गहुँगोरो छाला हुनेहरूको समाजमा पनि सौन्दर्यको मानक गोरो छाला नै भयो । र, त्यो गोरो छालाका लागि सौन्दर्य प्रशाधनहरूको निर्माण गरियो । तिनको बेग्लै बजार चलाइयो । परिणाम, जो त्यो सौन्दर्य मानकमा उत्तीर्ण हुन सफल भयो, उसैलाई सुन्दरीको तक्मा पहिराइन थालियो । ती केही हदसम्म अन्यभन्दा लाभान्वित पनि हुनथाले ।
बजारतन्त्रले अर्को विछट्टै काम पनि गर्‍यो, हिजो सामन्तवादसम्म पुरुषहरूको शरीरसम्बन्धी केही मानकहरू थिए र ती मूलत: शक्ति प्रदर्शन र पुरुषत्व सुनिश्चितताका निम्ति मात्रै थिए । पुरुषलाई ‘लोग्नेमान्छे’ जस्तो हुनुपथ्र्यो तर बजारमा बिक्ने सुन्दर बन्नुपर्दैनथ्यो । तर, बजारतन्त्रले त्यो पुरुषलाई पनि आफ्नो माखेसाङ्लोमा ल्यायो किनभने सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री त यो हिस्सालाई पनि बेच्नुथियो । अब मिस ब्युटी मात्र भएर पुगेन, मिस्टर ह्यान्डसमहरू पनि चाहिने भयो ।
बजारतन्त्रले महिलालाई केवल सौन्दर्य प्रशाधनको क्रेता मात्र बनाएन किनभने ‘भोग्या चिन्तन’ को जग बसेको समाजमा महिलाको मांस बजारबाट पाउने नाफा पुँजीवादले कसरी त्याग्न सक्थ्यो ? त्यसैको परिणाम हो, वर्तमान पोर्न उद्योग । संसारभरि हुने महिला बेचबिखनदेखि पोर्न उद्योगसम्मको कथा पितृसत्ताले जन्माइदिएको गणिका परम्पराकै आधुनिक निरन्तरता हो ।
यी पृष्ठ विमर्शपछि गरिने प्रश्न हो— अहिले भइरहेको शरीर राजनीतिबारेको बहस के निर्णयात्मक हुन सकिरहेको छ त ? अवश्य छैन, किनभने यसले एउटा खुट्टा मात्र समातेको छ– मर्यादा मानकको खुट्टा । मर्यादा मानकीकरणको विरोध धूवाँदार भइरहेको छ तर त्यससँगै र त्योभन्दा प्रबल भइसकेको सौन्दर्य मानकीकरणबारे सामान्य प्रश्न पनि उठाइएको छैन । किन ? किनभने त्यो प्रश्नले उठाउने समस्याको समाधान केवल शरीर राजनीति विमर्शबाट टुंगिदैन बरु आहुतिले ‘महिला मुक्तिको माल बजार’ (२४ फागुन २०७६, कान्तिपुर) मा दिएको निष्कर्षजस्तै वर्तमान अर्थ–राजनीतिक संरचनाको अन्त्यबिना सम्भव छैन । सौन्दर्य मानकको पासोले जकडिरहने संरचना भएको बजारतन्त्र रहँदासम्म महिलाको शरीरमाथि हुने राजनीति चलिरहन्छ ।
जसरी वर्तमान अर्थ–राजनीतिक संरचनाको जन्मले मर्यादा मानकीकरणलाई कमजोर बनायो त्यसैगरी वर्तमान बजारतन्त्रको अन्त्यले मात्र सौन्दर्य–मानकीकरणको अन्त्य सुनिश्चित गर्छ । वर्तमान अर्थ–राजनीतिक संरचनाको अन्त्यसँगै एकै निमेषमा यो शरीर राजनीति अन्त्य हुनेछ भन्ने पक्कै पनि होइन । तर, यसको अन्त्यले मात्र शरीर राजनीति अन्त्य हुने सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ । विडम्बना सिंगो बहसमा यो खुट्टा नै छुटेको छ । सम्भवत: यो बहसमा आएपछि वर्तमान अर्थ–राजनीतिक प्रणालीको विरोधमा उभिनुपर्ने ‘बाध्यता’ ले पनि त्यो संकुचन सिर्जना गरेको हो ।
–बेल्वासे अंग्रेजी साहित्यमा त्रिभुवन विश्व विश्वविद्यालयमा एमफिल अध्ययनरत छिन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ ११:२९